Indawo yokuhlala yaseKudajadri Drizzle, eKalpetta, eWayanad - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseKudajadri Drizzle, eKalpetta, eWayanad
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguVinoop
Igumbi labucala kwikhaya lelifa. Idityaniswe nendlu yangasese esentshona, igumbi libanzi, licocekile kwaye linomoya
Indawo yam yindawo yokuhlala yelali kwindawo ezolileyo, ezolileyo kunye nezolileyo. Eli likhaya lezinyanya zaseJain elineminyaka eli-100 ubudala.Sibonelela ngokutya okucocekileyo kwemifuno okuphekwe ngononophelo kwaye kwaphakwa ngothando. Le ndlwana ibekwe kwintsimi enamasimi ajikelezayo njengejinja, i-tapioca, iyam, njl.njl kunye nepepile kunye nekofu kwilali ebizwa ngokuba yiKaniyambetta, kumgama oziikhilomitha ezili-12 ukusuka eKalpetta, kwikomkhulu lesithili. Le ndawo ikwikhilomitha nje enye ukusuka kwindlela enkulu ukusuka eKozhikode ukuya eMananthavady. Kwale ndlela inye isetyenziswa njengendlela enkulu yaseKozhikode Bangalore ngexesha lasebusuku ngenxa yokuvalwa kwetrafikhi ebusuku kwiindawo zepaki yelizwe.
4.97 · Izimvo eziyi-36
ISithili saseWayanad ngummandla webhayoloji eyahluka-hlukeneyo esasazeke kwi-2,132 yeekhilomitha zesikwere kwi-Western Ghats ephakamileyo, iWayanad sesinye sezithili ezimbalwa eKerala ekwazileyo ukugcina ubume bayo. Zifihlwe kwiinduli zeli lizwe zezinye zezizwe ezindala, ezingekachukunyiswa yimpucuko. Kwaye imizobo yokuqala yembali eKerala efunyenwe kumazantsi eentaba ze-Edakkal nakwindawo engqonge i-Ambukuthimala inobungqina benkcubeko yangaphambi kwembali esusela kwiXesha leMesolithic. Ibukeka ngendlela emangalisayo, iyaziwa ngamasava ayo angaphantsi kwetropikhi, izikhululo zeenduli ezibukekayo, amasimi eziqholo, amahlathi ashinyeneyo kunye nezithethe ezityebileyo zenkcubeko. Indibano epheleleyo yentlango, imbali kunye nenkcubeko, iWayanad ikwincam esemazantsi yethafa leDeccan elimangalisayo. Sizamile ukugxila kucoceko kunye nococeko ngaphandle kokuthomalalisa kulonwabo lomzimba olufanelekileyo ukuphumla, ukuphumla kwaye ukonwabele ukuthula. Siyathemba ukuba uya kuphinda wenze okufanayo ngelixa uhlala apho. Ngokuphathelele ukutya, yinjongo yethu ukukunika ipalethi enencasa.
Umbuki zindwendwe ngu- Vinoop
Ndihlala kwindlu enkulu ekufutshane kwaye ifumaneka xa kufuneka. Kuya kubakho elinye ilungu losapho lwethu elifumanekayo kwipropathi ukukunceda ngeemfuno zakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Siyakuqinisekisa ngeholide emnandi nehlala ixabisekile apha
Ndihlala kwindlu enkulu ekufutshane kwaye ifumaneka xa kufuneka. Kuya kubakho elinye ilungu losapho lwethu elifumanekayo kwipropathi ukukunceda ngeemfuno zakho ngalo lonke ixesha l…